Dowladda Kenya ayaa sheegtay Shabaab inay qorsheynayaan weeraro inay ka geystaan dalkaasi Kenya – STAR FM SOMALIA
Dowladda Kenya ayaa sheegtay Shabaab inay qorsheynayaan weeraro inay ka geystaan dalkaasi Kenya
Dowladda Kenya ayaa sheegtay Shabaab inay qorsheynayaan weeraro inay ka geystaan dalkaasi Kenya inta lagu guda jiro xilli roobaadka, waxaana Kenya ay bixisay digniin ku aadan suggida ammaanka dalkaasi.
Sarkaal ka tirsan Booliska Kenya oo lagu magacaabo Joseph Boinnet ayaa ugu baaqay dadka Kenyaanka ah in ay feejignaan muujiyaan Xilli Roobaadka inta lagu jiro si ay uga digtoonaadaan Weeraradda Al-shabaab.
Waxa uu sheegay in Magaalooyinka ay Soomaalida leedahay ee Waqooyi Bari sida Gaarisa,Wajeer,Dhadhaab iyo Mandheera mar hore loo digay oo la gaarsiiyay Digniinta.
Sarkaalkaan ayaa sheegay Bartilmaameedka Shabaabka in uu yahay Magaalooyinka ku yaal Dhulka Xeebaha leh sida Lamu,Mpoktini, iyo Mombasa oo ay doonayaan Shabaabka inay weerarada ka geystaan.
Magaalada Nairobi ee xarunta Dalka Kenya ayuu sheegay in iyana aad loo adkeeyay Suuqyada,Goobaha Waxbarashada,meelaha ay Bulshada isugu timaado iyo Xafiisyada Dowladda oo iyana ay eeganayaan dadka geysanaya weerarrada ka dhanka ah dadka Kenya ka ah.
Ciidamada ammaanka dalka Kenya ayuu sheegay inay galeen feejignaan sare oo ku aadan xaqiijinta ammaanka Magaalooyinka waaweyn inta lagu guda jiro xilli roobaadka.
Shabaab ayaa xarumo ku leh dalka Kenya, gaar ahaan waxa ay ku sugan yihiin Kaymaha Boni oo ay ka abaabulaan inta ugu badan weerarada ay dalkaasi ka geystaan.
Ra’iisul Wasaaraha Somaliya oo dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu ka sooqeyb galay shirkii biljimka
Dalka masar ayaa waxaa lagu xiray dad u dhashay dalka soomaaliya
Wararka58 mins ago